Rosia · Avrily, 2022 · Global Voices teny Malagasy
Rosia · Avrily, 2022
Tantara mikasika ny Rosia tamin'ny Avrily, 2022
Fahalalahàna miteny 27 Avrily 2022
Lasa fitaovana fanarahamaso, fampanginana sy fiadiana amin'ny mpanohitra, ampiasain'ireo mpanolotra volavolan-dalàna any amin'ny firenena sasantsasany ny hoe "fakom-baovao" sy "fandisoana vaovao".
Fianakaviana mitolona mitady izay hanampiana ireo Azerbaidjaney tafahitsoka ao amin'ny tanàna iray tratry ny fahirano ao Okraina
Azia Afovoany sy Kaokazy 26 Avrily 2022
Nandamoka ny fikasàna hamindra toerana ireo mponina, hatramin'ny 14 Martsa, daty iray izay nandaozan'ireo fiaran'olon-tsotra maherin'ny 160 ny tanàna nony farany.
Rakipeo: Famakafakana ny fomba famalian'ny vahoaka Rosiana ny lahatsoratra momba ady ao amin'ny tambajotra sosialy
Okraina 25 Avrily 2022
Amin'ity herinandro ity isika dia hiresaka mikasika ny fikarohana ataon'ny Civic Media Observatory momba ny fahatsapan'ny Rosiana ny ady ao Okraina.
Voafandrika ao Mariupol: Toy ny ahoana ny ao anatin'ny tanànan'i Okraina tratry ny fahirano
Okraina 22 Avrily 2022
Mariupol, ao atsimo-atsinanan'i Okraina, dia voahodidin'ireo tafika Rosiana efa ho herinandro mahery. Ireto no feon'ireo mponina sasantsasany ao aminy.
Niova ny fijerin'izao tontolo izao an'i Okraina’ hoy ny mpihira avy amin'ilay tarika malaza Okean Elzy
Okraina 21 Avrily 2022
Niresaka teo amin'ny Global Voices ny mpihira Svyatoslav Vakarchuk avy amin'ny tarika malaza Okraniana Okean Elzy, mikasika ireo olo-malaza Rosiana, ny faniriany hanao fampisehoana mandritra ireo krizy sy ny hoe nahoana no tsy azo atao ny manoratra mozika.
Tohin'ny fananiham-bohitra tao Okraina, mamaky ady amin'ireo olompireneny i Rosia
Okraina 12 Avrily 2022
Manoloana ireo sazy mavaivay sy ny fanenjehana ara-tsôsialy, vao mainka mampidi-doza ny maneho hevitra manohitra ny fitantaràna ofisialy an'ny Governemanta.
Makedonia 06 Avrily 2022
Mihetsika manohitra ny fanafihana rosiana ao Okraina eo anoloan'ny masoivoho rosiana ny Okrainiana monina ao an-drenivohitra Makedoniana Avaratra ao Skopje sy ny olom-pirenena ao an-toerana tamin'ny 25 Febroary.
Ho avy ny tontolo tsy misy Potinina, fa afa-miaina anaty tontolo tsy misy Rosia ve isika?
Okraina 05 Avrily 2022
Mety ho zavatra mety amin'izao fotoana izao ny fanapotehana an'i Potinina sy ny manodidina azy, saingy ahoana no ahafahana mametraka fifampiresahana amin'ny mpandimby azy hisoroana amin'ny ady hoavy?
Nitondra ho amin'ny fiampangan'ireo manampahefana ôfisialy ao Erevan sy Maosko an'i Azerbaidjàna ho tsy nanaja ny fampitsaharana poabasy ny nakàn'ny tafika azerbaidjaney ny tanàna stratejika ao Farrukh
Navalny, mpitarika ny Rosiana mpanohitra, miantso ny hanohizana ny fanoherana rehefa nahazo sazy an-tranomaizina 9 taona
Okraina 02 Avrily 2022
Tamin'ny 22 martsa, voasazy higadra 9 taona any amin'ny fitondram-pananjahantany henjana i Navalny, izay hanokana-monina azy tsy hifandray amin'ny voafonja hafa sy ny any ivelany.